အခမဲ့ Escape EA ၏ Lite ကို - အကောင်းဆုံး Forex EA ရဲ့ | ကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ | FX စက်ရုပ်
ပင်မစာမျက်နှာအခမဲ့ Forex ကွက်အခမဲ့ Escape EA ၏ Lite ကို
ဒါဟာတစ်ဦးအခမဲ့ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ် EA ၏ escape 0.03 ဟုသတ်မှတ်အများကြီးကန့်သတ်နှင့်အတူ။ အဆိုပါကုန်သွယ်မှုစနစ်တစ်ပြောင်းလဲနေသောစျေးနှုန်းအကွာအဝေး၏ breakout အပေါ်အခြေခံသည်။ input parameters တွေကိုသင်ကွဲပြားခြားနားသောကာလအပေါ်နီးပါးမည်သည့်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများကိုခြေရာခံရန်ခွင့်ပြုသည်။ အဆိုပါ Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး တစ်ဦး scalper အဖြစ်နှင့်အဆင့်ဆင့်ကိုအသုံးပြုပြီးကုန်သွယ်မှုအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ EA ၏ escape ညွှန်ကိန်းများနှင့်ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကို martingale, ဇယားကွက်ကုန်သွယ်, ခြံ, အဖြစ်က high-အန္တရာယ်နည်းစနစ်, မသုံးပါဘူး
ယင်းကို EA အစုံအပေးအယူဖွင့်လှစ် ဆိုင်းငံ့အမိန့် သတ်မှတ်ထားသောအချိန်က channel ကိုပြည်စွန်းမှာ။ အဆိုပါအမိန့်အသီးအသီးတစ်ကြိုတင်ယူအမြတ်ရှိပြီးရပ်တန့်အရှုံးဖြင့်ကာကွယ်ထားသည်။ စျေးနှုန်းအမိန့် Place ၏အချိန်မတိုင်မီ channel ကိုနယ်စပ်ကျိုးပဲ့ပြီဆိုရင်, အဘယ်သူမျှမအလို့ငှာဒီဦးတည်ချက်ထားလိမ့်မည်။
အမြတ်အစွန်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ဆုံးရှုံးမှုကိုလျှော့ချဖို့, တက Trail ရပ်တန့်သုံးစွဲဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ EA ၏အဆင့်မြင့်မြင့်ငွေစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အရှိပါတယ်: က (သတ်မှတ်ထားသောအန္တရာယ်အဆင့်ကိုပေါ် မူတည်. ) (သိုက်အရွယ်အစားပေါ် မူတည်. ), အော်တိုတွေအများကြီးတစ်ဦး fixed တွေအများကြီးသုံးပါနှင့်တွက်ချက်တွေအများကြီးနိုငျသညျ, သငျသညျအပြည့်အဝဖြစ်နိုင်သောဆုံးရှုံးမှုကိုထိန်းချုပ်ခွင့်ပြုထားသည်။
ဦးရေပြား mode မှာအများဆုံးရလဒ်များကိုသည်တစ်ဦးတင်းကျပ်စွာပြန့်ပွားခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်းအမိန့်ကွပ်မျက်မြန်ဆန် VPS နှင့်လည်းပြန်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူ ECN အကောင့်ကိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်။
အခမဲ့ Escape EA ၏ Lite ကို - အသုံးပြုသူထည့်သွင်းမှုများ
MagicId - တဲ့ Expert အကြံပေးများ၏ထူးခြားသော ID ကို။
RangePeriod - channel ကိုအရွယ်အစား (အထက်နဲ့အောက်အဆင့်) အဆုံးအဖြတ်ပေးဘို့အချိန်အပိုင်းအခြား။
နေကြပါတယ် - ရုပ်သံလိုင်းအရွယ်အစား (အရေအတွက် RangePeriod ကာလ) ။
RangeMaxRatio, RangeMinRatio - အမြင့်ဆုံးနှင့်နောက်ဆုံး 50 ကာလကျော်ပျမ်းမျှအကွာအဝေးမှ channel ကိုအကွာအဝေးများနိမ့်ဆုံးအိုင်အိုဒင်းအချိုး (ဥပမာ RangeMaxRatio= 0.6) channel ကိုအရွယ်အစားပျမ်းမျှအကွာအဝေးထက်နည်း 60% ရှိရမည်ဆိုလိုသည်။
ColdStart - အဖွင့်အချိန် (မှားယွင်းသော) အတွက်စောင့်ဆိုင်းနေသည်ကို EA မှာဆိုင်းငံ့အမိန့်၏လက်ငင်းအားမရ (မှန်) start သို့မဟုတ်ပြန်လည်စတင်။
HS, က MS - ဆိုင်းငံ့အမိန့်နေရာအချိန် (နာရီနှင့်အနုတ်) ။
သူ, ME - အချိန် (နာရီနှင့်အနုတ်) ဆိုင်းငံ့အမိန့် delete သို့မဟုတ်ဖွင့်လှစ်အမိန့်ကိုပိတ်ဖို့ရန်။
MaxLot - တဦးတည်းအမိန့် (ဒီဗားရှင်း 0.03 ဖို့အစုကို) ၏အများဆုံးတွေအများကြီး။
MainLot - ထိုအဘို့အလို့ငှာအများကြီးတန်ဖိုး ( LotManual mode ကို) ။
LotType - တွေအများကြီးရွေးချယ်ရေးမုဒ်။
LotManual - အမိန့်တွေအများကြီးနဲ့ညီ MainLot.
LotRisk - စာရေးအန္တရာယ်အဆင့်ကိုပေါ်အခြေခံပြီးတွက်ချက် FactorRisk.
LotAuto - တွေအများကြီးအကောင့်ရှယ်ယာအပေါ်မူတည်ခြင်းနှင့် FactorAuto.
FactorRisk - အမိန့်နှုန်းအများဆုံးခွင့်ပြုသည့်ဆုံးရှုံးမှု, AccountEquity ၏% ။
FactorAuto - အသီးအသီးနှုန်း AccountEquity MainLot.
ယူနစ် - အဘို့ယူနစ်ကိုရွေးချယ်ပါ Stoploss နှင့် Takeprofit:
PERCENT - အကွာအဝေး channel ကို၏% (Buy Stop အမိန့်များအတွက်: 0% အောက်ရုပ်သံလိုင်းနယ်နိမိတ်ဖြစ်ပါသည်, 100% အထက်နယ်စပ်ဖြစ်၏ရောင်း Stop အမိန့်အဘို့အဆန့်ကျင်ဘက်) ။
Takeprofit - အမြတ်တန်ဖိုးကိုယူပါ။
Stoploss - အရှုံးတန်ဖိုးကိုရပ်တန့်။
ကပ်တွယ်မှုကို - (ပိတ်) ကို Trail ရပ်တန့် function ကို enable (တွင်) သို့မဟုတ် disable ။
TrailStart - ကပ်တွယ်မှုကိုရပ်တန့်သက်ဝင်စေဖို့အလို့ငှာပွင့်လင်းသောစျေးနှုန်းအနေဖြင့် pips အရေအတွက်။
TrailStop - စျေးနှုန်းကနေကပ်တွယ်မှုကိုရပ်တန့်အတွက်မှတ်တိုင်အရှုံးအဆင့်အထိ pips အများဆုံးအရေအတွက်သည်။
ShiftUp - အထက်ရုပ်သံလိုင်းနယ်စပ်မှဆွေမျိုးအားမရပြောင်းကုန်ပြီအမိန့် pips အတွက် (>0<0 နယ်စပ်ကိုအောက်တွင်ဆိုလိုတယ်, နယ်စပ်အထက်တွင်ကိုဆိုလိုသည်) ။
ShiftDn - အနိမ့်ရုပ်သံလိုင်းနယ်စပ်မှဆွေမျိုးအားမရပြောင်းကုန်ပြီအမိန့် pips အတွက် (>0<0 နယ်စပ်အထက်တွင်ကိုဆိုလိုသည်, ထိုနယ်စပ်ကိုအောက်တွင်ဆိုလိုတယ်) ။
ShowInfo - ပြပွဲ (မှန်) သို့မဟုတ်ဝှက် (မှားယွင်းသော) ကသတင်းအချက်အလက် panel ကို (က testing နဲ့ optimization စဉ်အတွင်း panel ကို disable လုပ်ဖို့အကြံပြုလိုတယ်) ။
InfoFontColor, InfoFontSize - ထိုအချက်အလက်ကို panel ကိုအပေါ်ပြထားတဲ့စာသားရဲ့အရောင်နဲ့အရွယ်အစား။
ShowRange - (က testing နဲ့ optimization စဉ်အတွင်း disable လုပ်ဖို့အကြံပြုလိုတယ်) (အယူမှား) ကိုရုပ်သံလိုင်းနှင့် Fibonacci အဆင့်ဆင့်၏အမြင်အာရုံ display ကို (မှန်) ကို enable သို့မဟုတ် disable ။
RangeColor - channel ကိုနှင့် Fibonacci အဆင့်ဆင့်၏အရောင်။
အခမဲ့ Escape EA ၏ Lite ကို Download လုပ်ပါ